Khabiir Ku Xeeldheer wuxuu sheegaa sababta loo bilaabi lahaa Ganacsi Ganacsiga ah Si sahal ah ayaad uga fakartaa
Qof kasta oo doonaya inuu bilaabo ganacsi,Qorshuhu waa tallaabada ugu horreysa ee lagu bilaabayo hawlahaaga. Dad badan ayaa ku boodaya inay bilaabaan shirkad la'aanruntii waxay ku fekerayaan waxyaabo, maxaa yeelay waxay dareemayaan daal ka shaqeynta dadka kale. Si kastaba ha ahaatee, waxay weli u baahan tahay qaarwaqtiga iyo kakanaanta ficilada joogtada ah. Nasiib wanaag, waxaa jira fursado badan oo loogu talo galay dadka xiiseynayain ay bilaabaan ganacsigooda internetka. Khabiirka hoggaanka sare ee Semt Adeegyada Dijital, Michael Brown wuxuu sharaxayaa waxatalaabooyinka bilaabista ganacsigaaga internetka ayaa ah kuwa ugu muhiimsan.
Haddii aad iibinayso badeecad, mar walba hubi in ay tahaytayada ayaa ku haboon qaabka ganacsigaaga. Dhab ahaantii, macaamiisha maanta waxay diyaar u yihiin in ay bixiyaan wax badan oo loogu talagalay alaabooyinka ay ku kalsoon yihiin,gaar ahaan haddii marka aad ka iibsanayso ganacsi yaryar. Waxaa jira tusaalooyin badan oo ka mid ah hooyooyinka dharka ka dhigayawakhti firaaqo ah oo aad si fiican ugu noolaato. Haddii aad rabto inaad dhisto ganacsi weyn, hubso in alaabtaadaiska ilaali inta kale. Jinsiyadda hoose waa marna madadaalo, gaar ahaan tartamada oo dhan dibadashirkadaha. Waqti ka dib, waxaad ku guulaysankartaa aad u badan ganacsigaaga internetka haddii aad leedahay dhibco kala duwan.
U Diyaargarowga Reerka
Haddii aad ubaahan tahay raasumaal si aad u bilawdo shirkadda, hubi inay tahaylacagta aad awoodid inaad lumiso. Dad badan oo maanta ah ayaa ka walwalsan in ay qaataan khatar aad u badan oo ay lumiyaanmaalgelinta hore ee ganacsiga. Inkastoo tani ay noqon karto cabsi macquul ah, si aad u hesho guulo ganacsi, waa inaadisku day inaad qaadatid khatarta. Waxaa jira dad badan oo maanta ah kuwaas oo khatarta ku jiray, waxayna horseedday guul ka badan tanmarnaba malayn karo. Wax kastoo aad riyadiisa tahay, waxaad u baahan tahay inaad qorshe u hesho si aad u fuliso. Qorshe la'aan, adigawaxay ku jiri doonaan lacag badan oo lagu maal-galiyo ganacsiga iyo wax kale oo soo laabanaya.
Raadi Lamaane Aaminsan
Isbeddelada ku yimaada horumarinta teknoolajiyadasiinayaa awood dheeraad ah milkiilayaasha ganacsiga yar yar. Waxay ka dhigeysaa in ganacsiga internetka ay fududahay in ka badan sidii hore. Iyada oo isku dhafanbixiyeyaasha adeegyada sida Sare ,Suuq-geynta ganacsigaaga internetka wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah farsamada gacanta oo si sahlan u shaqeeya. Goormaaasaasayaashu waxay xoogga saari karaan arrimaha ugu muhiimsan sida wax soo saarka, qaybinta, iyo saadka, lammaanaha lagu kalsoon yahaywaxay ka dhigeysaa website-kaaga iibka ah. Sidoo kale, habkan oo kale ayaa kuu oggolaanaya inaad ku soo celiso wakhti iyo maaliyad ku saabsan kireysiga kooxee takhasus u leh mashruucaaga iyo sameynta iyaga oo isku duuban. Waxa aad sameyneyso waa inaad horumariso qiimaha gaarka ah ee adigabadeecada ama adeegga, samee miisaaniyad iyo diyaar u noqo inaad ganacsigaaga ka qaadato dhulka oo aad ka hesho caawinaad xirfadeed ee lataliye dijital ah Source .